Ariana Grande achiviga mari muchivande kune vateveri vane mari - Nhau
Kuru Macelebs Style Blog Varaidzo
Zvinobhadhara kuva fan of Ariana Grande !
Ipo iyo denda rinonzi coronavirus inoenderera mberi nekuremadza nyika, nyeredzi yepop iri muchivande kupinda mukati kubatsira vateveri vane mari.
Maererano ne Peji Rechitanhatu , Ariana akanyengedza kutumira mari kune vanopfuura makumi maviri vateveri vakarasikirwa nemubhadharo nekuti havachashandi.
Chirevo chinotaura kuti anowanzo kutumira madhora mazana mashanu nemadhora chiuru kuburikidza neakakurumbira nhare yekubhadhara nhare yeVenmo.
'Akabata ruoko ndokuchengeta muhoro wangu wemwedzi,' mumwe fan akaudza Peji Yechitanhatu.
Kubuda kwecoronavirus kwakamanikidza kuvharwa kwemabhizinesi mazhinji munyika, uye nyika yekugamuchira vaenzi yakanyanya kurohwa. Mutoro wezvemari kubva pakusashanda uri kunzwika sevashandi vanogara pamba kudzora kupararira kwechirwere.
Ariana haasi iye chete muimbi ari kutsveta mari muma fan account emabhengi. Angangoita maviri Taylor Swift vateveri vataura kuti muimbi 'Mudiwa' ari kuvabatsira kubiridzira zvimwe zvikwereti.
Mumwe fan, muimbi wemifananidzo uye mugadziri wemifananidzo, akataura kuti anga achifunga kubva muNew York nekuti raramo yake yaityisidzirwa. Taylor, fan akati paTumblr, akamupa $ 3,000.
ndakagadzira chinyorwa pane tumblr nezvekuti ndaitya sei kuti ndaisazokwanisa kugara ndichigara muNYC nekuda kwezvakaitwa nekorona kumhizha yemimhanzi. @ taylorswift13 chaiyo-ruoko-rwakachengetedza kugona kwangu kugara pano. handigoni kana kutenda maziso angu izvozvi pic.twitter.com/3hAxkSVvGo
- holly Turner (@ittybittyholly) Kurume 25, 2020
'Ndakaita chinyorwa pa tumblr nezvekuti ndaitya sei kuti ndisingakwanise kuramba ndichigara mu NYC nekuda kwezvaitwa nekorona kumhizha yemimhanzi,' fan pane Twitter. '@ taylorswift13 chaizvo single-ruoko akaponesa kugona kwangu kwekugara pano. handigoni kana kutenda maziso angu izvozvi. '
Tsamba yaTaylor yakati, 'Holly, wagara uripo nekuda kwangu. Ndinoda kuvapo kwauri izvozvi. Ndinovimba izvi zvinobatsira. Rudo, Taylor. '
beyonce naJay z kubvunzurudzwa
Iyo superstar yakatumirawo $ 3,000 kune imwe superfan iyo yakamborasa basa rayo sevharesi ye cocktail kuDisney World.
'Handina basa, handina mari, handina nzira yekubhadhara mabhiri angu rn. Kana paine chero munhu anokwanisa kupa uye anazvo mumwoyo yavo kuti adaro, chero chinhu chinonyatso batsira nemabhiri izvozvi, 'Samantha Jacobson akanyora paTumblr.
Taylor, achiona chikumbiro, akapinda.
AKANDIDA KUTI NDINODA BUDDI NGUVA YEKUTANGA YATINOSANGANA NAYE NDIRI KUTI NDINONYANYA KUSHURE. pic.twitter.com/pyVKWHruEk
- samantha (@ manthapaige13) Kurume 25, 2020
'AKANDIDA KUTI NDINOPA BUDDI NGUVA YEKUTANGA YATINOSANGANA NAYE NDIRI KUTI NDINOPA KUSHURE,' akadaro fan mushure mekunge mari yapinda muaccount yake.
Nyeredzi yeAmerican Chopper mari yaPaul Teutul Sr yakaipisisa kupfuura iwe zvaunofunga
Kane Brown anotsanangura kurasika kwaakaita kuseri kwake
yakawanda sei flip kana flop inogadzira episode
akaita miranda lambert kubiridzira pablake shelton
mitambo yakaratidzwa swimsuit modhi kate upton